Udedelwe ngebheyili umsolwa kwela-Manjoo | News24
Udedelwe ngebheyili umsolwa kwela-Manjoo
OWESILISA wasendaweni yaseGrange osolwa ngecala lokubulala engxabanweni okusolwa ukuthi eyokushayelisana kabi emgwaqeni (road rage) udedelwe ngebheyili yemali engu-R5 000.
UMnu Bongani Mncwabe (30) ubevele eNkantolo kaMantshi yaseMgungundlovu ngoLwesihlanu olwedlule mhla zili-13 kuNtulikazi (July) nalapho kade ezofaka khona isicelo sakhe sebheyili.
Imibandela yebheyili kamsolwa ukuthi abike esiteshini samaphoyisa kanye ngesonto, angaphumeli ngaphandle kwaseMgungundlovu ngaphandle kokuba azise umphenyi wecala kanti futhi angagxambukeli nofakazi bombuso.
Umsolwa ubesechithe amasonto amabili ebhadle esitokisini ngecala lokubulala uMnu Farhaad Manjoo kanye nelokuzama ukubulala uMnu Rajesh Aumsedew.
UMmeli kamsolwa uMnu Phumalani Fakude uthe uvese ukuthi unobufakazi obusha obuqanda ekhanda be-video eyaqoshwa ngesikhathi kwenzeka lesi sigameko. UMnu Fakude uthe umsolwa wayezivikela ngesikhathi edubula amahlandla amabili, inhlamvu eyodwa yashaya uMnu Manjoo washona enye yashaya uMnu Aumsedew walimala kanzima.
Lesi sigameko senzeka mhla zingama-30 kuNhlangulana (June) ekhoneni lomgwaqo u-Pietermaritz Street kanye no-Pieter Kerchoff Street eMgungundlovu.
UMnu Mncwabe kusolwa ukuthi wadubula wabulala uMnu Manjoo wabe eselimaza noMnu Aumsedew ngesikhathi kunengxabano yokushayelisana kabi.
Ummeli kamsolwa uveze ukuthi umsolwa uyakuphika ukuthi wadubula ngoba kwakunengxabano kodwa wathi wadubula ngoba ayezitshela ukuthi udunwa imoto yakhe.
Icala lihlehliselwe umhla zili-15 kuNcwaba (August). Uphenyo luyaqhubeka.